Wasiirka Dhaqaalaha: Nidaamka is dhexgalku maahan mid shaqeeynaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxooti ka bannaan-baxaya siyaasadda dawladda ee lagu adkeeyey soo-galootiga. sawir: Fredrik Sandberg/TT
La daabacay fredag 22 december 2017 kl 10.21
Wasiirka dhaqaalaha Sweden Magdalena Andersson (S) ayaa aamin-san in aan lagu guuleey-san sidii dadyoowga dalka qaxa ku yimid loogu suurtagelin lahaa la qabsiga bulshada Sweden, halka qaabilaadda qaxootigana aan si wanaag-san loogu guuleey-san, sida ay aamin-san tahay.
-Nidaamka is-dhex galka ayaan u shaqeenayn sidii looga baahnaa iyo hab wanaag-san wixii ka horreeyay xilligii guga ee 2015, balse waxaa aniga ii muuqda in aan loo baahneyn in la qaabilo tiro qaxooti ee ka badan inta awood loo lee yahey in lagu hago la qabsiga bulshada. Haddii kale u wanaagsanaan meeyso dadka magan gelyada dalka ku yimaada, sidoo kale u wanaagsanaan meeyso bulshada ey u yimaadeen, sida ay sheegtay mar ay wareeysi siisay war-geeyska Dagens Nyheter.
Qaxootiga dalka yimaada ayaa kala kulma xaalad adag, dhanka kale sida ay aamin-san tahay Magdalena Andersson iney suurtagallo ka wanaag-san ee wax-barasho iyo hooy ka heli lahaayeen waddammada kale ee Yurub iyo in dalabkooda si degdeg ah loo maareeyo ama jawaab looga siiyo.
-Waxay iila muuqataa inuu suurtagalka qaxootigu uga wanaag-san yahay haddey waddammo kale magan-gelyo ka dalbadaan, sida ay ku sheegtay wareeysiga war-geeyska DN.
Wasiiradda dhaqaalaha ayaa sidoo kale aamin-san inuu xisbigeedu gacan ku leeyahay masuuliyadda ah inuu dalku galo xaaladdaa cakiran.
-Haddaannu nahay xisbiga Socialdemokraterna waa in aannu dib isugu noqonnaa. Waxay ahayd in aannu horay u caddeeyno in aannu dalku qaabili karin qaxooti ka badan inta tabartayada ah.